मार्च 23, 2012	हिज्जेको खेल : लेख्ने जति फेल !
‘मौलिकतावादी’हरू त यसबाट हर्षित होलान् तर त्यसवेला नेपाली भाषाको हालत के हुन्छ ? यो भाषा नै रहन्छ कि भाषिका बन्न पुग्छ ? विवेकहीन उन्मादमा शब्दहरूलाई अन्धाधुन्द घाइते बनाउँदै भाषाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु कति उचित हो ? सबै भाषाबाट आएका शब्दलाई वाग्देवीका रूप सम्झेर उत्तिकै श्रद्धा, आदर र सम्मान गर्दै तिनको स्वरूप, आकार र ध्वनिप्रति संवेदनशील भएर मर्यादा र अनुशासन कायम गर्दै अघि बढ्दा भाषाको उन्नति हुन्छ कि शब्दलाई लांछित र अपमानित गर्दै, लछारपछार पार्दै, विकृति र अराजकतालाई उन्मादी पाराले प्रवर्धन गर्दा ? भाषिक परम्परा र त्यसका उपलब्धिलाई जोगाउँदै, नयाँ सम्पत्ति थप्तै, दुनियाँभरि फैलिंदै उँभो लाग्नु वांछनीय हो कि भएको सम्पत्ति र उपलब्धि विसर्जित गर्दै, मौलिकताका नाममा एक्लिंदै, सीमित–संकुचित हुँदै उँधो लाग्नु हाम्रो अभीष्ट हो ? हामी सबैले साँच्चै गम्भीर हुनुपरेको छ किनभने हाम्रो अस्मिता, हाम्रो गौरव, हाम्रो उन्नति–प्रगति र नेपालीका रूपमा हाम्रो पहिचान तथा अस्तित्व नेपाली भाषासँगै गाँसिएको छ ।
वस्तुत: नेपाली भाषामा समस्या छैन । हिज्जेका समस्या यसमा कृत्रिम रूपले, जबर्जस्ती लादिएका हुन् । यसको वास्तविक समस्या हिज्जे होइन, हिज्जेका नाममा नक्कली समस्या खडा गरेर आफ्नो भाउ बढाउन लागिपरेका मठाधीशहरू हुन् । तिनको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिदिनासाथ हाम्रो भाषा सहज, स्वाभाविक गतिमा प्रसन्नतासाथ अघि बढ्छ । यसको पहल अब प्रयोगकर्ता स्वयम्ले गर्नुपर्ने भएको छ किनभने भाषाको सम्प्रभुता उनीहरूमै निहित हुन्छ र भाषा बिग्रँदा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने पनि उनीहरू नै हुन् । आफ्नो मातृभाषालाई आफ्नै आँखासामु क्षयीकरण र पतनको खाडलमा जाकिन नदिन पनि यो पहलकदमी अत्यावश्यक भएको छ ।
← हिज्जेमा भाडभैलो	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...